ရခိုင်သားတိအတွက် ၀တ္ထူချေတစ်ပုဒ် နဲ့ မျိုးစောင့်တရား | ngalone
← MAC Changer Software
ရခိုင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ ရီပိုင်နက်ပြသနာကိစ္စပတ်သတ်လို့ →
ရခိုင်သားတိအတွက် ၀တ္ထူချေတစ်ပုဒ် နဲ့ မျိုးစောင့်တရား
ဟိုးအယင် ခါက ရွာကြီးတစ်ရွာ ရှိပါရေလတ် ..။ယင်းရွာကြီးနားမှာ အရာရွာချေတိလဲရှိပါရေလတ် ။လယ်လုပ် ချောင်းလုပ်ပြီးကေ အသက်မွီးကတ်ပါရေ ။ရွာချေ တိကတော့ အသာအသာနဲ့ တိုးတက် ပါလတ်ကတ်ပါရေ လတ်။
ရွာကြီး ကတော့ အယင်ခါထက်တောင် ဆင်းရဲ့ လာရေ၊ နိမ့်ကျလာပါရေလတ် ။ ယပိုင်ဖြစ်လာခါ ရွာကြီးက ရွာသူကြီးစွာ
“ဒေပိုင်နီလို့ တော့ မဖြစ်ယာ ငါရို့ ရွာက ရွာသားတိကို တစ်ခုခု လုပ်မှ ဖြစ်ဖို့ ယာ ဆိုပနာ” စဉ်းစာပါရေလတ်။
တရက်နိန့် ရွာသူကြီး စွာ ရွာသားအားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးကေ ပြောပါရေ ။ “ မိုးသောက်ခါ ငါရို့ ရွာလုံးကျွတ်ပေါင်းပြီးကေ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနို့ဆွမ်းလှူ ဖို့ ၊ ယင်းအတွက်နဲ့ တအိမ်က နို့ တခွက်စိ ယူလာပနာ ညဇာဘက် ရွာသူကြီး အိမ်ရှိ မှာ ချထားရေ စဉ်းဒွား နှစ်လုံးမှာ လာထည့်ကတ်ဖို့ ” မှာလိုက်ပါရေ ။
ရွာသူကြီးပါးက ပြန်လာရေ ရွာသားတိစွာ ကိုယ့် အတွက်ချက်နဲ့ ကိုယ် ပြန်လာကတ်ပါရေလတ် ။ ဖြူတောင်းဆို ရေ ရွာသားကတော့ “ ငါ့မှာ မိုးသောက်ခါ ညှစ်လို့ရရေ နွားနို့တသစ်ကို ရောင်းပနာ ခတောင်းတထည် ၀ယ်ရဖို့ ၊ ရွာ သူကြီး ပါးမှာ နို့ တခွက် လားထည့် ပစ်ခိ ကေ လောက်ဖို့ မဟုတ်ယာ ၊အူး ဒေလောက် တရွာလုံး ထည့်ရေ နွားနို့ အိုးမှာ ငါရီ တခွက် ရောပလိုက် လို့ ကား ဇာဖြစ်ဖို့ လဲ ၊ နို့ အစား ရီတခွက် ထည့်ပစ်ခိမေ ၊ ညည့် ခါ အသူ မြင်ဖို့ လဲ ” ဆိုပနာ တွက် ပါရေလတ် ။
အရာ လူတိ ကလဲ ကိုယ့် စွာနဲ့ ကိုယ် တွက်ချက် နီကတ်ပါရေလတ် ။ “ငါ့မှာ နို့ ကိုရောင်းလို့ ဆန်ဝယ်ရဖို့ စွာ ငါရီတခွက် ထည့်လို့ အသူသိဖို့လဲ ဒေလောက်နွား နို့မှာ ရီ တခွက် ရော လို့ တစ်ခုလဲ ဖြစ်ဖို့ စွာကားမဟုတ် ” ယပိုင် တွက်ချက် နီကတ်ပါရေ လတ် ။
ယင်းနိန့် မိုးလင်း ခါ ရွာ သူကြီး က စုထားရေ နွားနို့ တိကို ပြင်ဆင်ဖို့ ရွာ ကလူတိ ကို အုန်းမောင်းခေါက်ပနာ ခေါ်ပါ ရေလတ် ။
ရွာ သားတိ ရောက်လာ ခါ “အဲ့ ငါရို့ ရွာသားတိ စုံစုံလင် လင် စုထားရေ နွားနို့ ကိုတချက် ကြည့်မေ ဇံ ” ဆို ပနာ ခတော် နဲ့ နွားနို့ ကို ကြည့်ရေ ခါ ၊ နွားနို့ စွာ ရီတိ တိ ဖြစ်နီပါရေ လတ် ။ရွာ သားတိလဲ ဒေချင့် ကို မြင်ရေ ခါ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်ငြိမ်နီ ကတ်ပရေလတ် ။
ရွာသူကြီး က “ကြည့်စမ် ငါရို့ ရွာသားတိ ဇာလောက် အတွက် စိလဲ ၊ဇာလောက် အချောင်ခိုလဲ ဆိုစွာ ” ၊ ဘေးနား က ဇာမဟုတ် တေ ရွာ အငယ်စိချေ တိတောင် ငါရို့ ရွာ ထက် သာလခယာ ၊ ဇာဖြစ်လို့ လဲ ဆို စွာ မင်းရို့ တိမြင်ယာလား ၊ ဇာလောက် ရှက်ဖို့ ကောင်းလဲ ” ဆိုပါနာ ဆုံးမဖူးပါရေ လတ် ။
အခု ကျွန်တေ် ရို့ရခိုင်သားတိလဲ ဒေပိုင်ပါဗျာယ် ။ တယောက်ကို တယောက် အတွက် စိနီကတ်တေ။ယကေ နွားနို့ တိ ရီချည်း ဖြစ်နီ စွာ ကားအဆန်းမဟုတ်ပါ နှင်း။ အစိုးရအမှုထမ်း လုပ်နီရေ လူတိကလဲ “ငါ့ရို့ ကား အစိုးရဘားမှာ လုပ်နီစွာ ဇာပိုင် အမျိုးသားအရေး ကို လုပ်လို့ ရဖို့ လဲ” ၊ မင်းကျွန်ဖြစ် နီရေလူတိ ကလဲ “ ငါရို့ မှာကား အချေနဲ့ အငယ်နဲ့ ရခိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်လို့ မဖြစ်ယာ” ၊ ကလိမေချေ တိကလဲ တမျိုး “နိုင်ငံရေးလုပ်စွာ မီးရို့ နဲ့ က မဆိုင်” ။ ယပိုင်တွက်ချက် နီကတ်ပါရေ ။
အမျိုးသားရေး ဆိုစွာ လက်နက်ကိုင်မှ ဖြစ်စွာ မဟုတ်ပါ ။ကိုယ့် လူမျိုးကို ချစ်တေ လူတိအတွက် အမျိုးကို ချစ်တေ အကြောင်းကို လုပ်ပြဖို့ ၊သက်သိပြဖို့ အခွင့်အရေး လူတိုင်းမှာ ရှိပါရေ ။အစိုးရ အမှုထမ်းကလဲ အမှုထမ်းအလျောက် ၊ကလိမေချေတိက လဲ ကလိမေချေ အလျောက် ကိုယ့် လုပ်နိုင်ရေ နီရာက လုပ်ကတ်ကေ နွားနို့ဒွား နွားနို့ နဲ့ ပြည့်လာ ပါဖို့။ အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တေ အလုပ်စွာ လူမျိုးတမျိုး အတွက် အသက်လောက် အရေးကြီးရေအလုပ်ပါ။ မျိုးစောင့် တရားပျက်ကေ ၊ လူမျိုးတမျိုး လဲ ပျောက်လား ဖို့စွာကျိန်း သေပါယာ။ ရခိုင် သမချေ တိ အချိန်တန်လို့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ယာ ဆိုတောင် ရခိုင် လူမျိုး ထဲ့က ရခိုင်သားချေ တယောက်ကို ရာ ယူသင့်ပါရေ ။ဒေချင့် စွာ အမျိုးကို စောင့်ရှောက် စွာပါ ။ ရခိုင်လူမျိုး မပျောက်အောင် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းစွာပါ ။ ကောင်းကောင်း အခြေခံကျရေ အမျိုးသားရေ အလုပ်ပါချင့်။ ဒေအလုပ်ကို ရခိုင် သား/သူ တိုင်း တက်နိုင်ရေ အလုပ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါရေ ။
အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုင် အနေနီးလို့ တော့ ဆင်ခြေ မပီးပါကေ့ ၊ ယကေ ကျွန်တော့် post တစ်ခု မှာ ရွီးဖူးစွာပိုင် သာဓက ထပ်ပီးရပါဖို့ယေ ။ ကိုယ်နီုင်ရေ နေရာတိ ရှိရေ ဆိုစွာ ကိုပြောချင်စွာပါ။ ကိုယ့်အမျိုးအတွက် အရာတစ်ခုလဲ မလုပ်ပီးနိုင်ကေ နီ ပါ ရခိုင်သူ/သား ချင်းတော့ ယူကတ်ပါလို့။ အမျိုးကိုစောင့်ပါ ထိန်းသိမ်းပါ။ ဒေပိုင်မဟုတ်ပဲ ရခိုင်သမချေ တစ်ယောက် ရခိုင်မဟုတ်ပဲ တခြားလူမျိုးနဲ့ ယူလားခရေ ဆိုကေ ဒေချင့်စွာ ၊ ရခိုင်လူမျိုးကို ကမ္ဘာမြေပြင်က ပျောက်အောင် ဖျောက်နီစွာ မှာ အဓိက တရားခံတယောက်ဖြစ်လားပါယာ။ ဒေနိန့် ခေတ်မှာ ကျွန်တော် ဒေချင့်ကို လူမျိုးရေးအယူးသီးလို့ ၊တဘက်စွန်းရောက်လို့ ပြောနီစွာမဟုတ်ပါ။ လူ့ အခွင့်အရေး အတိုင်းလူသားတိုင်း ကိုယ့်အခွင့် အရေးနဲ့ ကိုယ်ပါ ။ဇာသူ့ ကိုလဲ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူလို့ဆိုပနာ တရားစွဲလို့ မရပါ ။
ယေဇူနန့် သိထားစီချင်စွာ တခုတည်းပါ။
ရခိုင် ဆိုရေ လူမျိုး တမျိုး မပျောက်လားအောင်အတွက် ပါ။ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူလိုက်တေ အမှုစွာ လူမျိုးတမျိုး အတွက် ဇာလောက်နစ်နာရေ ၊ဆိုစွာ သိသင့်ပါရေ ။
ကျွန်တော် နောက်ဆုံး ပြောချင်စွာက ကိုယ် နိုင်ရေ နီရာက ရခိုင်လူမျိုးကို ချစ်ကတ်ပါမေ ။ထိန်းသိမ်းကတ်ပါမေ ။နွားနို့ တိနဲ့ ပြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားကတ်ပါမေ။
This entry was posted in Uncategorized and tagged ရခိုင်ဝတ္ထု. Bookmark the permalink.
One response to “ရခိုင်သားတိအတွက် ၀တ္ထူချေတစ်ပုဒ် နဲ့ မျိုးစောင့်တရား”
မ..မ | March 22, 2012 at 1:47 am | Reply
ရခိုင် ဆိုရေ လူမျိုး တမျိုး မပျောက်လားအောင်အတွက် ပါ။